You are here: Pyidaungsu Myanmar Mini-Encyclopedia / To A Better Health Article Collection / Others / Advanced Directives
ကြိုတင် ညွှန် ကြား ချက်
မိမိ မကျန်းမာ တဲ့ အခါ၊ ဆေး ရုုံ တက် ရ တဲ့ အခါ၊ ယူသွားသင့် သော စာရွက်စာတမ်း ဖြစ် ပါ တယ်။
သေခါနီး အသည်း အသန် ဖြစ် တဲ့ အခါ မျိုး တွေ မှာ ကိုုယ့် စိတ် ကြိုက် ဖြစ်ရ အောင် မိမိ သဘောတူ လက် မှတ် ထိုုး ထား တဲ့ စာရွက်စာတန်း ဖြစ် ပါ တယ်။
Notary public ( သက်သေ ) ရှေ့ မှောက် မှာ ဖြစ် စေ၊ ရှေ့နေ မျက် မှောက် မှာ ဖြစ် စေ၊ မိမိ ကိုုယ် တိုုင် လက် မှတ် ရေး ထိုုး ထား တဲ့ မိမိ ဖြစ် စေ ချင် သ လိုု လိုုက် နာ ကြ ရ အောင် မှတ် တမ်း တင် ထား သော စာ ရွက် စာ တန်း ဖြစ် ပါ တယ်။
နိုုင် ငံ ခြား မှာ ဆေးရုုံ တက် တာ နဲ့ တပြိုင်နက် Advanced Directives ပါ ပါ သလား၊ ပါ ရင် ပေး ပါ ဆိုု ပြီး လူ နာ ရဲ့ ဖိုုင် တွဲ ထဲ မှာ တစ် ခါ တည်း ထည့် ထား ပေး လိုုက် ပါ တယ်။
ဘာ ကြောင့် ဒီ လိုု လုုပ် ရ သ လဲ ဆိုု ရင် ကိုုယ် က သေ ခါ နီး အ ချိန် မှာ အင်အား တွေ ဆုုတ် ယုုတ် တာ ကြောင့် ဘာ မှ မ ပြော နိုုင် တော့ ပါ။
ဒီ လိုု အ ချိန် မျိုး မှာ ရှိ သမျှ အမျိုး တွေ၊ special nurse တွေ၊ ဆရာဝန် တွေ၊
ဘာ မှ မ ဆိုုင် တဲ့ ရပ်ဆွေ ရပ် မျိုး တွေ၊ သူ ငယ် ချင်း တွေ ရောက် လာ ကြ ပြီး တစ် ယောက် တစ် ပေါက် ပြော ပြီး သဘော ထား အမျိုးမျိုး တွေ ငြင်း ကြ ၊ခုုန် ကြ၊ ရန် တွေ ဖြစ် ကြ နဲ့ ရှုပ်ရှက် ကိုု ခပ် နေ တတ် ကြ တာ ကိုု မျက်မြင် ကိုုယ် တွေ့ လဲ ဖြစ် ရုုံ မက၊ အမြဲ လဲ ကြား နေ လေ့ ရှိ ပါ တယ်။
သေခါနီး အ ချိန် ဟာ အားလုုံး သိ ကြ တဲ့ အ တိုုင်း အေးအေး ဆေး ဆေး ဖြစ် ရ မဲ့ အ ချိန် ဖြစ် ပါ တယ်။ အာရုုံ တွေ များ ရ မဲ့ အ ချိန် လည်း မဟုုတ် ပါ။
အေးအေး ဆေး ဆေး ပေး မ သေ ပဲ၊ သွေး တွေ သွင်း ကြ၊ ဆေး တွေ ထိုုး ကြ၊ နှာ ခေါင်း ပိုုက် တွေ ထည့် ပြီး အစာ တွေ လောင်း ထည့် ကြ နဲ့ ခံ ရ တဲ့ လူ က မသက်သာ လှ ပါ။
အထူး သဖြင့် မရ တော့ ဘူး လိုု့ သိ ရ တဲ့ အခြေ အနေ မျိုး ဟာ အေးအေး ဆေး ဆေး ပဲ မှိန်း နေ ပြီး သေ သွား တာ အ ကောင်း ဆုုံး ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒါ ကြောင့် လဲ၊ ကိုုယ် ကြိုက် တဲ့ အ နေ အထား ကိုု ကြို တင် မှာ ထား ဖိုု့၊ အထူး သ ဖြင့် စာရွက် စာ တန်း နဲ့ ရေး ချ ထား ပြီး ကိုုယ့် သ ဘော အ တိုုင်း နောက် ဆုုံး အခြေ အနေ ကိုု ဖြစ် သွား ရင် အ ကောင်း ဆုုံး ဖြစ် ပါ တယ်။
မောင်နှစ်မ တွေ လဲ အငြင်း မ ပွား ရ တော့၊ ဘေး က မ ဆိုုင် တဲ့ လူ တွေ လဲ လိုုက် ရှုပ် လိုု့ မ ရ တော့ ပါ။
ဒီ လိုု မျိုး အ ခြေ အ နေ တွေ မြန်မာ ပြည် မှာ အ များ ဆုုံး တွေ့ ရ ပါ တယ်။
လူ နာ သေ ခါ နီး မှာ တစ် ယောက် တစ် ပေါက်၊ mass confusion ပါ ပဲ။
သူ နာ ပြု က လဲ သူ ထင် တာ တွေ လုုပ်၊ ဒီ အ ချိန် မှာ က တော့ သူ က ဆရာ ကြီး ဖြစ် နေ တာ ကိုုး။
နောက် ဆုုံး မ တော့ လူ နာ က သေ သာ သွား တယ်၊ ကျန် တဲ့ လူ တွေ က စိတ်ကြိုက် လုုပ် ကြ ြ့ပီး၊ လူ နာ ရဲ့ သ ဘော ထား မ ပါ တော့ ပါ။
ဗဟုုသုုတ အ တွက် တင် ပေး လိုုက် ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။
Advance Directive အပိုုင်း ၂
နှစ်မျိုး နှစ်စား ရှိ ပါ တယ်။
၁. Living Will မိမိ စိတ်ကြိုက် မိမိ ၏ ကျန်းမာရေး စောင့် ရှောက် မှု ကိုု ကြို တင် ရေးသား ထား ခြင်း
၂. Durable power of Attorney မိမိ က တစ် ယောက်ယောက် ကိုု မိမိ ကိုုယ် စား ကျန်းမာရေး စောင့် ရှောက် မှု ကိုု ဆုုံးဖြတ် ခွင့် ပေး ထား ခြင်း
ဥပမာ ---- လူ နာ ဟာ နောက် ဆုုံး ဆေးကုုသ လိုု့ မရ တော့ မဲ့ အခြေ အနေ၊ ကင်ဆာ နဲ့ သေ ခါ နီး အခြေ အနေ တွေ မှာ သေ ရ မှာ အင် မ တန် သေချာ နေ တာ မိုု့ အသက် ကိုု ခေတ္တ ဆက် ပေး ဖိုု့ အတွက် သွေး သွင်း ခြင်း၊ အစာ ကိုု ပိုုက် ဖြင့် ထည့် ပေး ခြင်း၊ အစာအိမ် ကိုု ဖောက် ပြီး အစာ ကိုု ပိုုက် ဖြင့် သွင်း ပေး ခြင်း၊ အသက် ရှူ ရပ် သွား ပါ က စက် မျိုး စုုံ တပ် ပြီး ရှူ ပေး ခြင်း၊ စက် ဖြင့် တပ် ၍ အသက် ရှူ ပေး ခြင်း များ ကိုု မလုုပ် ရန် ၊ တစ် နည်း ပြော ရ ရင် အကြောင်း မ ထူး တော့ မဲ့ ဟာ တွေ ကိုု မလုုပ် ကြ ရန် ဖြစ် ပါ တယ်။
သေခါ နီး မှာ comfort care ဖြင့် အေးအေး ဆေး ဆေး သေ သွား လိုု ကြောင်း ဆန္ဒ ဖော် ထုုတ် ဖိုု့ လိုု အပ် ပါ တယ်။
သိပ် နာ ကျင် နေ မယ် ဆိုု ရင် အနာ သက်သာ ရ အောင် ဆေး ယူ၊ မယူ ဆိုု တာ လဲ ထည့် ထား ဖိုု့ လိုု အပ် ပါ တယ်။
အရေး အကြီး ဆုုံး က တော့ သေရ တဲ့ အချိန် မှာ၊ အေးအေး ဆေး ဆေး ညင်ညင်သာသာ သေ ဖိုု့ ဖြစ် ပါ တယ်။
၂. နောက် တစ် မျိုး က
ကိုုယ် ကိုုယ်တိုုင် ဘာ မှ မဆုုံး ဖြတ် နိုုင် တဲ့ အခြေ အ နေ မှာ ကိုုယ် အင် မ တန် စိတ်ချ တဲ့ ဆွေမျိုး၊ သိုု့မဟုုတ် မိတ်ဆွေ တစ် ယောက် ယောက် ကိုု မိမိ ကိုုယ်စား ဆုုံး ဖြတ် ခွင့် ပေး ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။
ရေး ပုုံ နမူနာ ----
ကျွန်မ -------------- ( နာမည်၊ မွေး နေ့၊ မှတ်ပုုံတင် နံပါတ်၊ လိပ်စာ၊ အဖ အမည် )
မိမိ သဘော ဖြင့် စဉ်းစားချင့်ချိန် ပြီး၊ မိမိ သဘောဆန္ဒအလျောက် မိမိ ၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက် မှု အတွက် ဤ စာရွက် စာ တန်း ကိုု ပြုစုု ရေး သား ခဲ့ ပါ သည်။
ကျွန်မ ကိုုယ် တိုုင် ကျွန်မ ၏ ကျန်းမာရေး စောင့် ရှောက် မှု နဲ့ ပတ် သက် ပြီး မဆုုံးဖြတ် နိုုင် တော့ တဲ့ အခါ၊ အောက် ဖော် ပြ ပါ ပုုဂ္ဂိုလ်အား ကျွန်မ ကိုုယ်စား ၊ ကျွန်မ ကျန်းမာရေး စောင့် ရှောက် မုှုု မှာ ပြော ပိုုင် ခွင့် ရှိ သူ အ ဖြစ် သတ် မှတ် ပေး ထား ပါ သည်။
အမျိုး တော်စပ်ပုုံ/ မိတ်ဆွေ
ကျွန်မ ကိုုယ်စား ကျွန်မ ၏ ကျန်းမာရေး နဲ့ ပတ် သက် ပြီး အောက်ဖော် ပြ ပါ အချက် အ လက် များ ကိုု ကျွန်မ က အခွင့် ပေး ထား ပါ တယ်။
ကျွန်မ ကိုုယ်စား ၊ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက် မုှုု နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ဆေးကုုသ ခြင်း၊ ခွဲ စိတ် ခြင်း ၊ မလိုုလားအပ် သော ကုုသ ခြင်း များ ကိုု ကျွန်မ ကိုုယ် စား ငြင်း ပယ် နိုုင် ပါ သည်။
အစား အသောက် ကိုု ပိုုက် တွေ နဲ့ သွင်း ခြင်း စ သည် ဖြင့် ကိုု လဲ ငြင်း ပယ် နိုုင် ခွင့် အာဏာ ကုုန် လွှဲ ပေး ထား ပါ တယ်။
ကျွန်မ ရဲ့ ကျန်း မာ ရေး စောင့် ရှောက် မှု တွေ အပေါ်၊ ဆုုံး ဖြတ် ချက် ချ တာ ကျွန်မ ရဲ့ ကိုုယ်စား လှယ် ပေါ်မှာ အာဏာ ကုုန် လွှဲ ပေး ထား ပါ တယ်။
ကျွန်မ ရဲ့ ကိုုယ်စားလှယ် ဟာ ကျွန်မ အာဏာကုုန် ပေး ထား တာ ကျွန် မ မဆုုံးဖြတ် နိုုင် တဲ့ အခြေ အနေ မှာ အတွက် သာ ဖြစ် ပါ တယ်။ ကျန်းမာ ရေး က လွဲ လိုု့ အခြား ကိစ္စ တွေ မှာ ဆုုံး ဖြတ် ပိုုင် ခွင့် မရှိ ပါ။
ကျွန်မ ဒီစာရွက်စာတမ်း ကိုု လက်မှတ် ထိုုး တဲ့ အချိန် က စ ပြီး၊ ကျွန် မ ကိုုယ် စား လှယ် ဟာ၊ ကျွန်မ ကျန်းမာ ရေး နဲ့ ပတ် သက် ပြီး ပြော ပိုုင် ခွင့် ရှိ ပါ တယ်။
ဆိုုင်း ထိုုး ပါ
နာမည် ရေး ပါ
နေ့စွဲ တတ် ပါ
ဆိုုင်း ထိုုး သည့် နေရပ် လိပ်စာ
သက်သေ နှစ် ယောက် လောက် ရှိ ရင် ပိုု ကောင်း ပါ တယ်။
သူ တိုု့ ကိုု လဲ လက် မှတ် ထိုုး ခိုုငး် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
နောက်ဆုုံး မ တော့ မိမိဖြစ် စေ ချင် တာ တွေ ကိုု အကုုန် ချ ရေး ပါ။
အခုု ရေး ပေး ထား တာ ဥပမာ မျှ သာ ဖြစ် ပါ တယ်။
နိုုင်ငံခြား မှာ လူနာ ရဲ့ ဆန္ဒ ကိုု လေးစားစွာ လိုုက်နာ ပေး ပါ သော် လည်း မြန်မာ ပြည် ရဲ့ အခြေ အနေ ကျွန်မ မ သိ ပါ။
ဆရာဝန် များ၊ သူနာ ပြု များ၊ ဆေးရုုံ များ က ဘယ် လိုု တုုန့် ပြန် မယ် ဆိုု တာ လုုံးဝ မ ပြော နိုုင် ပါ။
သေချာ ခြင် ရင် တော့ ရှေ့ နေ တစ် ယောက် ယောက် နဲ့ လက် မှတ် ထိုုး ထား ရင် ကောင်း ပါ လိမ့် မယ်။
ရှေ့ နေ ဆိုု ရင် တော့ သူ တိုု့ ပိုု ပြီး အရေး ထား မယ် ထင် ပါ တယ်။
ကျွန်မ မြန်မာ လိုု ရေး တာ သိပ် ပြီး အဆင် မ ချော တာ ကြောင့် မိမိ ကိုုယ် တိုုင် ရေးသား နိုုင် ပါ တယ်။